Jananinepal.comसेक्सका चार उपयुक्त चरण - Jananinepal.com
सेक्सका चार उपयुक्त चरण
प्रकाशित मिति: ६ असार २०७७, शनिबार
मानव यौन प्रक्रियाको चक्रलाई चारवटा चरणमा बाडिएको छ ।
१. उत्तेजनाको चरण
२. प्लाटो फेज
४. रिजोलुसन फेज
सुरुमा शरीरका संबेदनसिल अङ्गहरुमा मुलायम स्पर्श गर्दाको समय उत्तेजनाको चरण हो। अनि प्लाटो फेजमा भएको यौन क्रिया निरन्तर रूपमा बढाउँदै लान सकिए एउटा त्यस्तो बिन्दुमा पुगिन्छ जहाँ पुगेपछि व्यक्ति यौन तनावबाट मुक्त हुन्छ। यसको अवधि निकै छोटो हुने भएता पनि मानव यौनजीवनमा उक्त चरणको विशेष महत्व छ, किनभने यतिबेला नै मानिसले प्राप्त गर्न सक्ने सुख वा आनन्दहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट सुख अनुभव गर्छ। यसैलाई चरमसुख भनिन्छ। तपाईंको सेक्स पार्टनरले प्रयोग गर्नुभएको मजा ( आ..ह..) शब्दले यसैलाई संकेत गरिएको हुनुपर्छ।
आधारभूत रूपमा महिला तथा पुरुषमा यौन प्रतिक्रिया चक्र उस्तै हुन्छ, तर पनि केही कुरामा भने फरक देख्न सकिन्छ। कतिपय महिलालाई चरमसुखको चरणसम्म पुग्न पुरुषको भन्दा बढी समय लाग्न सक्छ। शीघ्र स्खलन भएर यौनसम्पर्क राम्रोसँग नहुँदा महिलाले यौनसन्तुष्टि प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। यदि चरमसुखको चरणपछि पनि यौन क्रिया निरन्तर रूपमा भैरह्यो भने कतिपय महिलाले एकपल्टभन्दा बढी चरमसुख प्राप्त गर्न सक्छन्, तर पुरुषमा भने त्यस्तो हुँदैन। पुरुषलाई चरमसुख पाएर पुरानै अवस्था फर्किएपछि केही समयका लागि यौन कार्यका लागी पुर्णरूपमा उत्तेजित गर्न सकिँदैन।
यहाँ यौन प्रतिक्रिया चक्रमा मात्र होइन महिलाको यौनाङ्गको फरकपनमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। तपाईंलाई थाहै होला महिलाको यौन संवेदनशील अङ्ग भगांकुरु बाहिरतिरै हुन्छ। सामान्यतया पुरुष माथि र महिला तल रहेर गरिने यौनसम्पर्कले महिलाको भगांकुरलाई घर्षण गर्दैन। महिला माथि रहेर महिलाले आफूले चाहेजस्तो गरि आफ्नो पुठ्ठा चलाउन सक्छिन्, जसले यौनसुख प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। शीघ्र स्खलन भएपछि लिङ्ग शिथिल भएर यौनसम्पर्क गर्न नसकेको स्थितिमा चरमसुखतर्फ अग्रसर हुने अवसर नै हुँदैन। तपाईंलाई थाहै होला यसलाई हात वा औंलाले नै चलाएर यौन चरमसुख प्राप्त गर्न सहयोग गर्न सकिन्छ। यौन प्रसाधन जस्तो भाइब्रेटरको प्रयोग पनि अर्को उपाय हो।
योनिमा औंला वा अन्य कुनै लिङ्गाकार वस्तु पसाउँदा पनि महिलालाई यौन आनन्द प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईंकी पार्टनरले औंला पसाउँदा चरमसुख वा आनन्द प्राप्त गर्न सहज भएकाले आफ्नो सेक्स पार्टनर लाई यौनसुख प्रदान गर्न लिङ्ग पसाउनैपर्ने बाध्यता वा हीनताबोधबाट बाहिर निस्कन अनुरोध गर्छु।
त्यसबाहेक स्तन तथा अन्य यौन संवेदनशील अङ्गको मर्दन, घर्षण, अनि चलाउने जस्ता अनेक क्रियालापमा संलग्न हुन सकिन्छ भने अन्य अनेक प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। पुरुषहरू जस्तै महिलाहरू पनि यौन उत्तेजक दृश्य, स्पर्श अनि जहाँसम्म कि परिकल्पनाले उत्तेजित हुन्छन्। यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पाकक्रीडामा संलग्न भए यौन उत्तेजना प्राप्त गर्न र चरमसुखसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ। यसले यौनसम्पर्कमा संलग्न दुवै जनालाई यौन चरमसुख साथसाथै प्राप्त गर्न मद्धत पनि मिल्छ।
भाईरल सचिन परियार र रबिना बस्यालको “रातो रबर” बोलको गीत सार्वजनिक…
शान्ति श्री परियार र शिव लाल सापकोटाको “किन सानू” सार्वजनिक ..
हेटौंडा २ देवीपथमा आज देखि पुष्पा सुनचाँदी पसल सन्चालनमा
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओमा १५ लाख २९ हजार ४६० वटा आवेदन
तीन नेपाली नागरिकमा नयाँ प्रजातीको कोरोना देखा
हालसम्मकै ठूलो प्राथमिक शेयर आज बिक्री खुला
जन्मदिनको अवसरमा मामाघरलाई समाजसेवि सापकोटाको छोरा रेहान द्वारा सहयोग
बाग्लुङ्ग गल्कोटमा आफ्नो जन्मभुमि विकासका लागि प्रवासीहरु
माउन्ट गोवालिगोङ अल्ट्रा (टीएचटी) 55कि .मी मा नेपाल
देशलाई परनिर्भरतामा फसाउने षड्यन्त्र